Fanofana Trano ao Shina - Taona mpila ravinahitra Mpitari-dalana - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Fanofana Trano ao Shina - Taona mpila ravinahitra Mpitari-dalana
enim-bolana voalohany ny hofan-trano, petra-bola, sns.)
No tadiavinao amin'ny fanofana trano ao Shina? Toy ny fanofana Shinoa trano dia mety ho dingana samy hafa lavitra noho ny zavatra efa za-draharaha teo aloha, noho izany dia te-hanome ny sasany insider soso-kevitra sy ny loharanon-karena mba hanampy anao eny an-dalana
Raha mila fanampiana ianao mitady trano ao Shina, ny fahafantarana ny zavatra mba hitady ny, na ny fomba famantarana ara-drariny ny fifanekena fanofana ao Shina, ity vahiny ny mpitarika ny trano ao Shina dia tokony hamaly ny fanontaniana rehetra ianao.
Ampiasao ny rohy eto ny fizahan-takelaka mba hamakivaky ity ny harena na ny horonan-taratasy fotsiny nidina ho any ny maha-famakiana.
ny antsasaky ny dingana eto dia midika olona mba handika
Raha ny hevitrao fa isika efa hita na inona na inona, mba ampahafantaro anay ao amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny farany. Misy fomba maro fa afaka manomboka ny fikarohana ho an'ny trano ao Shina. Ny dingana voalohany dia ny hanapa-kevitra ho an'ny tenanao izay no tena zava-dehibe aminao: toerana, ny teti-bola na trano tsara. Izaho afaka milaza aminareo avy amin'ny zavatra niainako fa tsy ho vita mihitsy ny hahita ny fifandanjana tanteraka ny telo amin'ireo lafin-javatra ireo. Ianao, rehefa mitady ny manaraka Shina an-trano, dia zava-dehibe koa ny mahafantatra inona no mba hitady. Mazava ho azy fa ianao dia handeha ho any te-hanao tongotra-amin'ny alalan'ny an-trano mba hahazoana antoka fa ny fidiovana miasa, misy dia tsy misy bobongolo, etc, fa izay olon-kafa ve ianao mila tena mandinika ao Shina. Ao Shina, ny hofan-trano dia tsy mandray karama ao amin'ny voalohany isam-bolana, saingy matetika amin'ny tsikelikely isaky ny enim-bolana ary indraindray ny taona iray manontolo. Raha ianao no teo amin'ny fehikibony ny vola, ary tsy afaka mandoa ny enim-bolana eo aloha, dia mety ho azo atao mba hifampiraharaha ny fanaovana ny fandoavam-bola matetika tahaka ny isan-telo volana.
Na izany aza, eo ambany fifanarahana ity dia afaka mialoha ny tompony mba hanoherana amin'ny taha ambony amin'ny hofan-trano.
Ho an'ny petra-bola, dia afaka mialoha ny fandoavana na aiza na aiza avy - volana hofan-trano. Indrisy, efa mahazatra ihany koa ny mihaino ny vahiny very ny mipetraka taorian'ny fifanekena fanofana tapitra.
Noho izany, manao ny tsara indrindra dia ny miezaka sy hifampiraharaha ambany ny petra-bola amin'ny alalan'ny fandoavana bebe kokoa ny hofan-trano aloha.
Koa manamafy misy fepetra ao amin'ny fifanarahana mametraka ny petra-bola be sy ny fanantenana fa tsy ho tafaverina. Raiso an-tsoratra amin'ny antsipirihany ny toe-javatra ny zava-drehetra, ary ho azo antoka fa ireo antoko roa ireo tahirin-kevitra sy ny fifanarahana tao amin'ny toe-javatra ny trano.
Raha mandoa hofan-trano ary mipetraka, tsy miezaka mandoa ny vola.
Mandehana any amin'ny banky sy ny famindrana ny vola izay nananan'ny ny tompony ny tantara sy manana ny mpiasan'ny banky mamaritra inona avy ny fandoavam-bola dia ho tamin'ny famindrana sy fandraisana (e. Ity taratasy-dalana hiaro anao ao amin'ny hetsika fa ny tompony no miezaka ho avo roa heny hanangona amin'ny hofan-trano. Raha ianao no mandoa vola, ho azo antoka izy ireo hanoratra avy amin'ny antsipirihany"fandraisana"hoe ohatrinona no karama ary inona izany fa, miaraka amin'ny fanaovan-tsonia. Mialoha ny firosoana amin'ny fifanarahana, dia miezaka ny hijery raha afaka hifampiraharaha ny hofan-trano teo amin'ny tsara kokoa ny sehatra. Raha toa ka ny tompony no miezaka ny hofan-trano ny trano haingana araka izay azo atao, dia tokony ho afaka hifampiraharaha ny hofan-trano nidina kely. Tetika iray hafa, raha toa ianao manana antontan-tahiry nanorina ny, dia mandoa vola ny ankamaroan'ireo ny hofan-trano-anoloan'ny. Ny tompon-tany dia ho vonona kokoa mba hampihenana ny ankapobeny vidiny ny hofan-trano raha tsy manana mba matahotra ny enim-bolana teo ny tsipika eo amin'ny fahaiza-mba handrakotra manaraka andian-ny hofan-trano. Azonao atao ihany koa ny miezaka foana ny fifanarahana momba ny vidin-by manondro ny lesoka ny trano. Mampiasa ohatra azo tsapain-tànana eo amin'ny fifampiresahana amin'ny hafa ny trano tsy maintsy jerena akaiky (e. Misy ny trano ao amin'ny trano varavarana manaraka izany dia tsara kokoa ny fanaka sy ny fitaovana ho an'ny ny vola ihany).
Farany, miady hevitra momba izay mandoa ny fitaovam-pandraisana dia zoro hafa ny fomba fiasa ao amin'ny fifampiraharahana.
Raha toa ka ny tompony no tsy vonona ny hidina eo price, jereo raha tamin'izany fari-karena izy ireo dia ho vonona ny handoa ny fitaovam-pandraisana rehetra ao anatin'izany ny misy isan-taona ny fitantanana ny saram-pianarana aloa ho an'ny fiaraha-monina. Raha ny fitaovam-pandraisana matetika mba ho mora vidy, ny fitantanana ny sarany sy ny hafanana (raha toa ianao ka monina any avaratr'i Shina) dia lehibe ny fandaniana ary atao mihitsy aza ny vola ny iray volana ny hofan-trano. Raha tsy afaka mamaky Sinoa tanteraka, sonia ny anarany ny fifanarahana amin'ny fa na inona na inona endri-tsoratra Sinoa mety hanangana amin'ny alalan'ny fanairana ny saina. Misy fomba roa fa afaka miaro tena eto: ny Iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hiarovana ny tenanao rehefa miomana hanao sonia ny fifanekena fanofana ho an'ny trano ao Shina dia ny hitondra miaraka ny fiteny roa fifanarahana. Efa fantatra ireo mpiasa vahiny manerana an'i Shina izay efa nandoro ny fifanarahana nanome ny tompony ary na dia ny olona avy amin'ny sampan-draharaha geared amin'ny Shinoa tao an-toerana ny olona, tsy ho mpila ravinahitra vahiny. Mandany vitsivitsy dolara ny hividianana ny Shinoa malagasy Roa Fanofana Fifanarahana afaka hamonjy anao taonina ny aretin'andoha amin'ny ho avy. Ireo fifanarahana ireo karazana izay efa ampiasain'ny mpiasa vahiny nandritra ny taona maro noho izany rehetra ny mety ho kinks sy ny loza efa niasa avy. Mety hahazo pushback avy amin'ny tompony na ny sampan-draharaha momba ny fampiasana ny fifanarahana, fa indray mandeha izy ireo hahatakatra fa ara-drariny ny fifanarahana izay mamela anao mba hahatakatra tsara izay ianao sonia, ny ankamaroan'ny olona tsy an-tsaina. Safidy iray hafa dia ny hitondra miaraka amin'ny namana iray izay miteny Shinoa mba hanampy anao hijery ny tsirairay tsipika ny fifanarahana. Ny tsara indrindra dia ity namana ity dia manana karazana lalàna fototra, raha tsy izany dia mety tsy ho be ny fanampiana. Afa-tsy famantarana rehefa hahatakarana tanteraka ireo fifanekena sy matoky tsy misy fahabangana lehibe ny tompony afaka mampiasa manohitra anao. Nanofa trano ao Shina afaka tokoa ho saina sy ny asa noho ny eo ho eo ny olona, ary mihoatra noho izany aza, raha tsy miteny na inona na inona ny Teny Sinoa (efa heverina ho miezaka ny hianatra ny fomba miteny Sinoa talohan'ny ianao tonga.).
Soa ihany fa, raha toa ianao ka manaraka ny fepetra ao amin'ity tari-dalana, ho azo antoka ianao dia hahita tsara ny toerana sy ny fampiasana ny fiteny roa fanofana fifanarahana, dia tsy tokony hanana be loatra ny olana.
Efa nanofa trano tao Shina teo aloha? Aoka isika hahafantatra ny traikefa ary koa ny na inona na inona zava-dehibe tsy voasarona ao amin'ity tari-dalana ao amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany.
Download Soso-kevitra Dia tsy MAINTSY Fantatrao Aloha ny fandehanana any Shina'.
Tsotra ireo fa matetika dia odian-tsy hita soso-kevitra mety manao na mandika ny diany. Josh dia ny mpamorona ny Tranonkala izay efa monina ao Shina ny fianakaviana nanomboka tamin'ny taona. Nandritra izany fotoana izany dia efa nandeha tany amin'ny alalan'ny fiaramanidina, ny fiaran-dalamby, fiara, môtô, ary na dia ny rameva mba hijery ny zoro rehetra ao amin'ny firenena. Raha tsorina dia, mianatra ny teny mandariny talohan'ny nifindrany tany shina. Tsy miombon-kevitra tanteraka aminao, Hank. Azo antoka, zava-dehibe ny na miteny Shinoa na ny olona mba hanampy nandika, saingy betsaka kokoa ny dingana noho izany. Ny hetra tokony ho ampiasaina ny orinasa izay nandray anao. Tokony tsy mila miahiahy momba izany manokana. No Shina no fitsipika tenancy hanao izay rehetra tokony manaraka. Ohatra, raha toa ny mpanofa dia nahita zana-ny famelana tsy nahazoana alalana. Afaka izy ireo ho evited sy ny zavatra toy izany ara-dalàna? Eto rehefa mpanofa hita subletting, dia hahazo efatra ambin'ny folo andro' ny filazana. Inona no mahita vanim-potoana ao shina. Izay no fanontaniana tsy mbola nahazo ny teo aloha.
Tsy mahafantatra ny valiny hafa ankoatra ny milaza fa ara-dalàna, ny iray hafa vahiny tsy lease amin'ny toerana tsy nisoratra anarana miaraka amin'ny polisy ao an-toerana.
Hi Josh, aho dia nifindra avy any Meksika mba Qingdao fa ny"visa"ho an'ny asa dia azo avoaka ao Hong Kong, tsy ao shina. azo atao ve ny manofa trano raha tsy misy ny fahazoan-dàlana? marary ho eo, fara fahakeliny, ny telo taona kanefa indrisy ny orinasa miasa ho an'ny tsy manana ara-dalàna ny fikambanana ao shina ary tsy mihevitra ho manana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Raha mbola manana asa visa ho an'i Shina, dia tokony ho afaka hanofa trano na aiza na aiza ny visa navoaka. Fa hoy aho, dia ho tena tsara momba ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa iray izay tsy dia ara-dalàna ny fikambanana ao Shina. Nisy vahiny izay efa lasa any am-ponja noho ny fanaovana izany. Misy ihany koa ny Sehatra maro noho ny fanofana Trano ao Shina, Ohatra: manampy sy manontolo ny vohikala dia amin'ny teny anglisy ihany koa. Ny tranonkala tsy manana tena tsara"Momba ny"pejy, ka kely aho resy lahatra. Izany hoe, dia toa toy ny fanantenana hafa (na na inona na inona voatanisa misy handeha ho TENA lafo vidy raha oharina amin'ny inona ny eny an-tsena satria ny lasibatra amin'ny vahiny). Izaho dia mitady an-trano any Shaoxing. Efa tsy hita na inona na inona tsara dia avy amin'ny sampam-miasa amin'ny sekoly. Inona no tokony ho Mendrika trano cost fa dia ny iray efitrano fandriany amin'ireo iray misokatra drafitra efitra fisakafoana Lou h amin'ny lakozia miampy efitra fandroana amin'ny mihidy ao ranonorana sy maka ny fomba tandrefana ny fidiovana sy ny fomba fijery fa tsy mitady any an-trano iray hafa. Indrisy, tsy afaka mamaly izany. Betsaka loatra ny variables: tanàna, manodidina, fangatahana, sns. Mila miresaka amin'ny ao an-toerana ny mpandraharaha.
Fizarana ny Fananana sy ny Trosa Rehefa Nametraka ny Washington Fanjakana ny fisaraham-Panambadiana
Laghail Taic - Sìona - Àisianach